Ukungoyiki, ukunyaniseka, ukuzinikela kokuzinikela, ukupha, ukuzibamba, ukuhlonela uThixo, kunye nokuxhamla; ukungonakalisi, ukuthembeka, kunye nenkululeko yomsindo, ukurhoxa, ukulingana, nokungathethi ngeempazamo zabanye, uvelwano lwendalo iphela, ukuthozama, kunye nokuthozama; umonde, amandla, ubumsulwa, nobunyulu, ukuqonda, isidima, ukungaphili, nokukhululeka ekuthini nizweni oku: luphawu lwalowo unobuhandiba, ubufanekiselo bukathixo, nyana kaBharata.
Vol. 1 DISEMBA, 1904. 3
Ilungelo lokushicilela, i-1904, nguHW PERCIVAL.
Ngomhla wamashumi amabini ananye kuDisemba, ilanga, elineentsuku ezinciphileyo ukusukela ngomhla wamashumi amabini ananye kaJuni, liqala ukugcwala ebusika, kwi-capricorn yomqondiso, uphawu lweshumi lwe-zodiac. Iintsuku ezintathu ezalandelayo zazisenziwa ngabantu bakudala kwizithethe zonqulo. Ezinzulwini zobusuku bamashumi amabini anesine, oko kukuqala kwamashumi amabini anesihlanu, njengeqela leenkwenkwezi elaziwa ngokuba yiCelecial Virgin okanye iVirgo, uphawu lwesithandathu lwe-zodiac, luphakame ngaphezulu kwenduli, bacula iingoma zokudumisa kwaye yayilixesha ke wabhengeza ukuba u-Thixo woMhla wazalwa; ukuba wayeya kuba uMsindisi wehlabathi kubumnyama, usizi nokufa. Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuDisemba, amaRoma abhiyozela umthendeleko wovuyo-umthendeleko wawo welanga-ukuzukisa ukuzalwa koThixo wosuku, nemidlalo kwisekethe yaqala ngovuyo olukhulu.
Lo Thixo Wemini, uMsindisi wehlabathi, wayengumntwana apho intombi enguIsis yayibiza ngokuba ingunina kulombhalo kwiTempile yaseSaïs eyayisithi- "Isiqhamo endisivelileyo lilanga." -e -ide) ibhiyozelwe kungekuphela nje ngamaRoma, kodwa ngabantu bakudala ngawo onke amaxesha, xa iNtombikazi enyulu-Imvelo-Isis-Maya-Mare-uMariya kwathiwa wazala ilanga leLungisa, u-Thixo woMhla, uMsindisi wehlabathi.
Indawo awazalelwa kuyo ichazwa ngendlela eyahlukileyo ngabantu abahlukeneyo. AmaJiphutha athetha ngayo njengomqolomba okanye ibhokisi, amaPersi athi yayiyindawo yokugcina izinto, amaKhristu athi yindawo yokubeka umkhombe. Kuzo zonke iimfihlakalo, nangona kunjalo, umbono walowo ugcinwe, kuba wawusuka kwindawo engcwele okanye emqolombeni ongcwele apho owazalwa, uMntwana ozelwe kabini, ozukisiweyo, kwaye yayingumsebenzi wakhe ukuphuma aye emhlabeni ayokushumayela. nokufundisa, nangokhanyiso lwenyaniso okuye, ukuze athuthuzele abasweleyo, nosizi, Ukuphilisa abagulayo neziqhwala, nokusindisa abantu ebumnyameni bokufa.
Ubambelele kwezorhwebo, kwisayensi, nasekuthandeni izinto zehlabathi kwenza ukukhanya kwezi nkolelo zamandulo.
Ilanga luphawu luka-Krestu, ophambili, ongokomoya kunye nelanga elingabonakaliyo, obukhoyo bakhe emzimbeni ukuyisindisa ekutshatyalalisweni nasekufeni. Iiplanethi yimithetho-siseko ebiza ukubonakala komzimba obonakalayo njengendalo ebonakalayo, kwaye ngeli xesha lo mzimba wumbi okanye indalo iphela iya kuhlala iLanga yoMoya iya kwenza ubukho bayo buvakale. Iziganeko zelanga zazizezolawulo lwamaxesha kunye namaxesha apho lo mgaqo kaKristu ungabonakala ngokucacileyo emntwini; kwaye nexesha leKrisimesi lelinye lamaxesha abalulekileyo xa kusenziwa amasiko angcwele kwiiMfihlelo.
Akukho mntu unike umxholo nokuba yeyiphi na ingcinga engenakusilela ukubona isibakala sokuba ibali lokuzalwa kukaYesu, u-Zoroaster, u-Buddha, uKrishna, u-Horus, uHercules, okanye nawuphi na umhlanguli wehlabathi, libali elichazayo nelichazayo Kuhambo lwelanga ngemiqondiso elishumi elinambini ye-zodiac. Njengakwindlela yokuhamba kwelanga, kunjalo nangaye wonke uMsindisi: uzelwe, atshutshiswe, ashumayele ivangeli yosindiso, andise emandleni nasezandleni, ekuthuthuzeleni, ekuphiliseni, ekuphakamiseni nasekukhanyiseni ilizwe, abethelelwe emnqamlezweni, afe , ukuba azalwe ngokutsha kwaye avuswe ngamandla akhe kunye namandla nozuko. Ukukhanyela le nyaniso kukubhengeza ukungazi kwethu okanye ukubhengeza ukuba singabanyamezeliyo.
“Kodwa,” ikhalaza lehlelo ngenkxalabo nangoyiko, “ukuba ndingavuma ukuba le iyinyani iyakuphelisa ithemba lam kunye nesithembiso sentlangulo nosindiso. Intliziyo yalowo amgqala njengoyena mntu uphikisana naye, engacingi ngentlungu ayinikayo kunye nethemba elisusa kulo ikholwa, "vuma oku kwaye uvakalise umgwebo wawo onke amahlelo kunye neenkolo. Ziya kudakumba, zinyamalale njengencakuba yekhephu phantsi kwelanga.
Kuzo zombini, ihlelo kunye nokuthanda izinto ezibonakalayo, siyaphendula: Kulunge kakhulu ukuyamkela inyaniso nangona kufanelekile ukuba ibangele ukuba izithambiso kunye nezithixo sizakhele phakathi kokukhanya nathi zisuswe kwaye zisishiya zingenanto, kunokuba siqhubeke sikholwa Kwihlabathi lobumnyama abantu ababelwa zizilo ezingabonakaliyo. Kodwa inxenye ethile yenyaniso ichazwa yinkolo nangumlandeli wokuthanda izinto eziphathekayo. Umntu ngamnye, nangona kunjalo, ogqithisayo; umntu ngamnye ucinga ukuba luxanduva lwakhe ukwenza ukuba omnye aphendlele kwenye impazamo yakhe. Kukho umhlaba oguqukayo kubo. Ukuba elowo uyazibeka endaweni yomnye, uya kufumana loo nto ihlileyo, ukuba agqibe ukukholwa, enye inayo.
Umkristu akufuneki oyike ukuba uzakuphulukana nenkolo yakhe xa ezamkela iinyani. Umntu othanda izinto eziphathekayo akafanele oyike ukuba uza kuphulukana nezibakala zakhe ukuba uyayamkela inkolo. Akukho nto ifanelwe kukugcinwa inokuphulukana nomntu ofuna inyaniso. Kwaye ukuba inyani iyinyani yokukhangela kwendoda yenkolo kunye nendoda yezibakala yintoni enokuthi isuse kwenye?
Ukuba inkolo iya kuvuma ubunyani bokwenyani kwimbonakalo yenyama, ziya kutshabalalisa izulu lakhe ngamasango alo amabi zijikeleze izithixo azifihlileyo, ukugxotha amafu angathi aqokelele amafu okuzibetha kwakhe, azole imimoya ekhathazekileyo. Esihogweni, imililo etshisa ezo ntshaba zingavumiyo ukukholelwa kwaye zilandele iimfundiso awazikholelwayo. Uyisusile into engeyiyo, uya kufumanisa ukuba emva kokutshiswa kwezithixo kunye nenkunkuma, kushiyekile kukho ubukho bokuhlala obungenakuchazwa ngumculo chisel okanye ibrashi.
Ukuba umntu othanda izinto zokomoya uya kuzifaka endaweni yenkolo enyanisekileyo, uya kufumanisa ukuba ngaphakathi kuye kukho amandla, isibane, umlilo, esimenza ukuba afumane uxanduva, enze imisebenzi yakhe, atshise oomatshini bendalo. kunye nokuqonda imigaqo-nkqubo aqhuba kuyo lo matshini, ukutshisa umkhethe kunye nokuzingca kweengcinga zakhe ezibandayo, ezinzima, kunye nokuziguqula zibe zimbonakaliso zezambatho kunye namangqina enyaniso yomoya ophilayo.
Ukuvuma ukuba ubomi buka Krestu luphinda-phindwe ngohambo lwelanga, oko akuthethi ukuba ikrisimesi imele ukuba sisazi seenkwenkwezi, imshiye uKristu wakhe aze abe ngumwexuki. Ngokunje ikrisimesi okanye ikholwa kuyo nayiphi na enye inkolo inalo neliphi na ilungelo lokufumana intengiso kwimiphefumlo, yenza intembeko nelungelo lokuzimela ngesikimu sayo kwaye izama ukwenza usindiso kwilizwe elilambeleyo ngokunyanzela ukuba ithenge iimpahla zayo.
Yaphula imiqobo! Hlukana nawo onke amathemba anokuvala ukukhanya! Wonke umhlaba uhlamba ngokukhanya kwelanga elinye, kwaye nabantwana bakhe bathabatha ukukhanya okuninzi njengoko banako. Akukho buhlanga okanye bantu banokulawula ukukhanya. Zonke ziyaqonda ukuba ilanga liyafana kubo bonke. Kodwa ilanga libonwa ngamehlo enyama kuphela. Iyifudumeza imizimba yenyama kwaye ibeka ubomi kuzo zonke izinto eziphilayo.
Kukho enye, iLanga engabonakaliyo, ilanga lethu lingumqondiso. Akukho mntu unokujonga kwilanga elingabonakaliyo kwaye aqhubeke efile. Ngokukhanya kokukhanya kwento kunqamlezwa kukokomoya. Nguye ke uKrestu osindisayo ebumnyameni nasekufeni, lowo ke wamkela ukukhanya.
Abantu ngoku bakhanyiselwe ngokwaneleyo kwisayensi yokuvumisa ngeenkwenkwezi ukuze bazi ukuba ilanga alizenzi iiofisi zalo kungengawo nawuphi na umbingelelo kunye nemithandazo enokuvela nokuba luhlanga olungakhathaliyo okanye olungazi nto, kodwa ngokuthobela umthetho we-cosmic. Ngokwalo mthetho onke amanye amalungu asemzimbeni asebenza ngokuvisisanayo. Abafundisi abavela amaxesha ngamaxesha apha elizweni bangabasebenzi nje bomthetho ongaphaya kokuqonda kwengqondo egqibeleleyo.
Isibakala sokuba sizalelwe kwintsapho yokholo lobuKristu ayisiniki ilungelo lokuzibiza ngokuba ziChristian. Kwaye asinawo umntu oba yedwa okanye naliphi na ilungelo elikhethekileyo okanye ilungelo kuKristu. Sinelungelo lokuthetha njengamaKristu kuphela xa umoya kaKristu, ongumgaqo ka-Kristu, uzibhengeza ngathi ngeengcinga nangentetho nangezenzo. Iyazazisa, ayiziswanga. Siyazi ukuba ayisiyiyo eyemvakalelo, ukanti siyayibona, siyiva kwaye siyichukumisa, kuba ingena, iqonde kwaye ixhasa zonke izinto. Kukufuphi njengoko kukude. Iyasixhasa kwaye iphakamise kwaye xa sikwindawo enzulu kulapho isiphakamisa khona. Ayinakuchazwa kodwa ngoku ivela kuyo yonke ingcinga nezenzo ezilungileyo. Lukholo lwabomeleleyo, uthando lwabanenceba, nokuthi cwaka kwezilumko. Ngomoya woxolelo, okhuthazayo kuzo zonke izenzo zokungazingci, nenceba kunye nokusesikweni, kwaye kuzo zonke izidalwa uyilo Mgaqo ubukrelekrele obumanyayo.
Njengoko zonke izinto kwindalo iphela zisebenza ngokuvisisanayo kwaye nangokomthetho oqhelekileyo, ngokunjalo nobomi esibakhokhelayo bumbophelela. Xa siphulukana nembono yomgaqo ophantsi, izinto ezisebusweni zibonakala ngathi konke ukubonakala kudidekile. Kodwa xa sibuyela kumgaqo siyayiqonda imiphumo.
Asingabo, njengoko sithanda, ukuhlala kwihlabathi eliyinyani. Silele kwilizwe lamathunzi. Ukulala kwethu ngoku kwaye emva koko kuyonwabisa okanye kuphazamiseka ngenxa yephupha okanye ubusuku obubangelwa kukutshintsha kwemithunzi. Kodwa umphefumlo awunakuhlala ulele. Kuya kufuneka kuvuke umhlaba wamathunzi. Ngamaxesha athile omnye umthunywa uyeza, kwaye ngokuchukumisa okunamandla, uyalela ukuba siphaphame kwaye sizibandakanye nomsebenzi wethu wobomi benene. Umphefumlo ovuswe ngolu hlobo unokuvela wenze imisebenzi yawo, okanye, ucelwe iphupha lamaphupha, inokubuyela kumhlaba wamathunzi kwaye ilale kuwo. Iyawa kwaye iphuphe. Ukanti amaphupha ayo aya kuphazanyiswa yinkumbulo yokuvuka kwayo de ibe izithunzi ngokwazo ziya kwenza iyelenqe lokuzinyanzela kobukumkani bayo, kwaye ke, ngentlungu nokungcangcazela kuya kuqala umsebenzi wayo. Umsebenzi owenziwe ngokudibeneyo ngumsebenzi wabasebenzi kwaye uqaqambisa umphefumlo kwizifundo ezifundiswa. Umsebenzi owenziwa ngokuzithandela ngumsebenzi wothando kwaye utyhila kumenzi weyinyaniso yesifundo asizisayo.
Wonke umntu ungumthunywa, unyana weLanga ongabonakaliyo, uMsindisi wehlabathi omila ngokukhanyayo kuKristu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba aqonde kwaye afezekise ukwazi okungapheliyo okuphilayo ngaphakathi. Ukusuka komnye oyaziyo le Consciousness sinokuba sinesipho seKrisimesi sokwenyani ukuba yile nto siyifunayo. Ubukho beKrisimesi sisango elikhokelela kubomi obungenasiphelo. Ubukho bunokuza ngelixa sisekumhlaba wesithunzi. Kuya kuvusa umntu olele emaphusheni akhe kwaye kumenze angoyiki amathunzi akufutshane. Ukwazi izithunzi ukuba zizithunzi akoyiki xa bezokubonakala ngathi bamkrwelele kwaye bamongamele.